London gudaheeda, xitaa waardiyayaashu waa soo jiidasho | Safarka Absolut
Beefeers, bobbies, bearskinhatMaxay ereyadaani adiga kula mid yihiin? Xaqiiqdii wax walba marka laga reebo fulinta sharciga. Kaalay, qofna kuma fakarayo inuu ugu yeedho waardiyeyaasha cunnada hilibka munaaraddii, Beto bilayska, ama madaxa maqaarka madax waardiyaha boqortooyada. Qofna maahee marka laga reebo reer London qudhooda, oo caado u leh naaneysta wax walba.
Taasna kaliya maahan, laakiin sidoo kale waxay iyaga ka dhigaan kuwo xamaasad leh soojiidashada dalxiiska.
ka kuwa shinnida cuna waa nimankaas waayeelka ah ee aan aragno iyaga oo ku socda dharka yunifoomka cas Tower of London. Inkastoo aan u maleyneyno inay yihiin kuwo fudud hagayaal dalxiis (Xaqiiqdii waa waxa ay inta badan sameeyaan), waxay isu rogaan inay noqdaan waardiyeyaal run ah, iyo in jagadaas ay helaan waxay ahayd inay ka mid ahaadaan ciidamada qalabka sida ee Ingiriiska ugu yaraan 22 sano oo ay laabta ku laalaadaan laba qurxin oo gaar ah; Ilaa dhowaan, rag baa jiray oo keliya. Yeomen, oo loogu yeero (waa hagaag, runti magaca rasmiga ah wuu ka dheeryahay, sidaa darteed sidaa darteed halkan ku soo celin meyno), waa ilaaliyeyaasha Tower of London tan iyo 1485. Magaceeda guud (beefeaters) malaha asal cad, sida dadka qaar u dhahaan waxay ka timid xaqiiqda ah in qayb ka mid ah mushaharka lagu bixin jiray hilibka lo'da, qaarna ay ka timid faransiiskii hore. buufiye - waardiyihii ilaalin jiray cuntada boqortooyada. Sikastaba xaalku ha ahaadee, 36-kan ilaaliye waa dhaqan london.
Sidoo kale waa ilaalada boqortooyada, oo ku labisnaa dharkaas oo koofiyad gaar ah ay ka muuqato (taas oo runtii aad ugu badneyd bambooyinkii dhammaan ciidammadii reer Yurub ee qarnigii XNUMXaad iyo qayb ka mid ah qarnigii XNUMXaad, xoogaa aan ku raaxeysan in lala dagaallamo, sax?). Ku badalida ilaalada xusuus qor ah Buckingham Palace waxay ka dhigan tahay dhacdo dalxiis oo ah maya soo booqde en London joojiya markhaatiga. In kasta oo madadaalada ugu badani ay tahay in la arko kuwa loo dirayo jidhkooda adag, oo u eg taallo.
Ugu dambeyntii, waxaa jira bobbies, taasi waa, booliska maxalliga ah (waxay umuuqataa inuu magacu yimid, sida hoos udhaca Robert, Robert Peele, oo ahaa wasiirka arimaha gudaha markii jirka la abuuray), si edeb iyo xamaasad leh. Si aad u badan oo aysan iyagu sida caadiga ah xitaa wadan qoryo (in kastoo ay sii kordhayaan dambiyada oo isbedelayay).
Si waad safreysaa a London Sawirna ha ka ag dhigin mid ka mid ah saddexda nooc ee saraakiisha sharci fulinta, maxaa yeelay waxay lumin doonaan waqtigooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » London xitaa waardiyayaashu waa soo jiidasho